DAQIIQO BADAN: SHARAXAAD KA BIXI DHIRTA, GURYAHA DAWOOYINKA, XEERARKA DARYEELKA, DHALASHADA IYO SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Qalabka gargaarka degdega ah ee daaqada - soodhiyo weyn
Warshad dhif ah oo isla markiiba nasasho u noqon karta oo u keeno faa'iidooyin caafimaad. Kuwaas waxaa ka mid ah dhagax weyn.
Cawska qallalan qaybiyey Ruushka, Mediterranean, Galbeedka Europe, Balkans.
Molodil badanaa waxaa laga helaa dooxooyinka, ballaadhan, cufan iyo kaymaha isku dhafan.
Daqiiqo weyn (sedum ugu badnaan) - warshad dilka ah, oo ka tirsan qoyska Crassulaceae.
Magacyo kale - cargo, kaabajka cagaaran, cawska nool, cawska hernia, cawska qallalan. Dhirta dhulku waxay tixgeliyaan Japan, Shiinaha, Kuuriya.
Dhererka ah ee afkoda waa ilaa 90 cm.Rizome waa gaaban, oo gurguurta. Maadada waa mid toosan, adag. Caleemaha waa ka soo horjeeda, sessile, flat, fareen leh ubaxyada buluug.
Inflorescences waa fowdo-argagax, 4-10 cm dhexroor. Ubaxyo yaryar, iyadoo leh tufaax cad iyo casaan, caddaan iyo midab khafiif ah-casaan ah. Haysasho ur aan caadi ahayn. Miraha waa pyatilistovka cagaaran.
Muddada ubaxa: Julaay-Agoosto. Warshadu waxay u dulqaadataa heerkul kasta, laakiin ma dulqaadanayo qoyaan badan.
Sida suunka ah, kaabash carrada jecel yahay meelo iftiin leh. Wixii beerashada waa in ay doortaan meelaha hoos u dhaco ma caleemo jiifsan.
Hal meel ah, xoqan ayaa koraya ilaa 5 sano. Dhirta ayaa jecel beerta beerta beerta.. Beeridda, isku dar ah ciid, compost iyo caleen caleen ayaa loo adeegsadaa saamiyada.
Bacriminta macdanta kaliya loo baahan yahay inta lagu jiro ubax firfircoon.
Sedum faafin by abuur, kala qaybinta ama looxaan. Xaaladda kowaad, dayrta ama gu'ga, abuurka waxaa lagu beeray sanduuqyada.
Si aad tan u samayso, isticmaal dhul dhulka leh. Marka beero xilliga deyrta, sanduuqyada ayaa laga soo qaadayaa waddada waxayna ku daboolaan barafka. Haddii beeritaanka la sameeyo guga, sanduuqyada daboolan waa in lagu hayaa ilaa 14 maalmood heerkul ah 0 ° S + 5 ° S.
Ka dib muuqaalka laba caleemo run ah, dhirta waa in la daadiyo oo degtaa meel joogto ah. Ka dib 1-2 sano, dhirta bilaabaan inay Bloom. Habkani wuxuu ku haboon yahay koritaanka dhagxaanta ee lagu koriyo.
Gooyn ee xididka geedka aad u dhaqso badanSidaa daraadeed, si loo kiciyo sedumada sidan, waxaa ku filan inaad ku faafiso gooynta diyaargarowga qiyaastii shan sentimitir dhererka meesha la doortay, ku dabool daboolka yar ee carrada iyo biyaha.
Laba toddobaad ka dib, geedo ayaa lagu beeray dhulka. Habkan waxaa loo isticmaalaa laga bilaabo Juun ilaa Sebtembar. Sidoo kale, ka dib markii caleemaha ubax la gooyaa karo oo ku faafi meel qalalan. Dhowr bilood gudahood, geeddi-socodka xididada ayaa la sameeyaa.
Guga, cawska nool waa la faafin karaa qaybta.. Taas awgeed, rhizome waa la gooyaa si ay qayb kasta u leedahay xididada iyo burooyinkeeda.
Waxaa lagu talinayaa in meelaha la jeexay lagu daweeyo fungicide, qalajiyo dhowr saacadood. Kadibna dhul dhulka ku furan. Habkani wuxuu ku haboon yahay dhirta dhalinyarada.
Sumarka wareegga ee dhulka ayaa u baahan si taxadar lehiyada oo aan waxyeello nidaamka xididka. Warshad leh buro waaweyn oo dhulka ah ayaa lagu beeray meel cusub guga.
Marka koraan Sedum guriga xilliga qaboobaha, dhirta waxaa la waraabiyaa wax ka badan hal mar bishii.
Xilligii xagaaga ee cawska hernia marar badan ka waraabiyey. Waa inaysan aheyn mid aad u badan oo udifaacay, sababtoo ah Isla mar ahaantaana waxaa jira halis ah ciribta xididka iyo dhimashada geedka.
In diyaarinta jiilaalka waxaad u baahan tahay in la gooyo caleemaha kor ku xusan heerka carrada. Dhirta da'doodu ka yartahay saddex sano lama gooyo.
Seddexleyda yaryar waxaa lagu bedelaa hal mar 2 sano, da 'jir - hal mar 4 sano.
Kaabashka bunni waxa uu ka jiraa cayayaanka sida weevil, sawfly, aphid, thrips.
Insectacrycides (Actellic) ayaa loo isticmaalaa si loola dagaallamo cayayaanka.
Sawfly sawirada Waxaad calaamadeyn kartaa caleenka kaabajka.
Caabuqyada fungal astaamaha muuqaalka ah ee dhibco mugdi ah on afkoda iyo caleemo. Qeybaha ay saameysay ee geedka waa in laga saaraa oo la gubaa.
Sedum wuxuu leeyahay bogsashada guryaha.
Si aad u isticmaasho daawada dhaqameed, qaybta kor ku xusan ee geedka ayaa la goostay xilliga ubaxa loo isticmaalo.
Qaadida alaabta ceeriin ah waxaa lagu fuliyaa cimilada qalalan. Cawska ayaa la qalajiyey aagagga hawo wanaagsan.
Walxaha ceeriin ah loo isticmaalo laba sano. Roots laga goostay Sebtembar - Oktoobar. Waxay googooyeen oo la qalajiyey hawada. Waxyaabaha qashinka waxaa loo isticmaalaa saddex sano.
Caleemaha cusub ee la ururiyey ayaa lagu kaydiyaa meel qabow mugdi ah. Xaaladdan, saddex maalmood gudahood waxaa jira kororka muuqda ee tirada walxaha firfircoon.
Kaabashka kaabajka ku jira ascorbic, malic, citric iyo asiidh kale oo dabiici ah, amino acids, catechins, carotenoids, tannins iyo macdanta macdanta.
Sedum loo isticmaalo in lagu daaweeyo cudurrada maqaarka ee daahirsan, hagaajinta qaababka dhiigga, daaweynta stomatitis iyo cudurada loo yaqaan 'periodontal', oo loogu talagalay daaweynta isku-xiga, laf-dhabarka.
Faleebo ee geedo wuxuu kordhiyaa dheef-shiid kiimikaadka, wuxuu xoojiyaa dayactirka unugyada, wuxuu leeyahay anti-bararka, qalabka cimilada iyo tonic, wuxuu kiciyaa wadnaha.
Hortaga biyaha loo isticmaalo sida antiscorrutic, ee cudurada of gallbladder iyo beerka, qaaxada sambabada.
Isticmaalka faleebo cusub oo maalinle ah oo bil kasta ah ayaa lagu taliyaa daaweynta helminthiasis.
Casiirka Sedum la wadaago gudaha suuxdinta. Waxaa loo isticmaalaa dibadda si loogu daaweeyo nabarrada, gubashada, cudurrada dermatoloji. Waxaa ku jira qeyb ka mid ah daaweynta lichen, cudur cirridka ah iyo xanuun. Caleemaha la jarjaray ayaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo bukaanka.
Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurrada dermatolojiga biyaha ayaa ka baxsaday caleemo cusub oo la jajabiyey. Daaweynta nabarrada iyo bogsashada boogaha, casiir cusub ama caleemo cusub ayaa loo isticmaalaa.
Ka hor inta aan la daboolin caleemaha la shiiday ee boogaha, waxaa lagu talinayaa in lagu kululeeyo masska, taas oo dardar-gelinaysa bogsashada. Daaweynta cudurka neurodermatitis iyo canbaarta, faleebo saliid ah ayaa lagu daboolaa maqaarka ay waxyeeleeyeen iyaga oo leh suuf.
Waraaqda Stonecrop waxay gacan ka geysan doontaa dhimista xanuunka iyo ka qaadista barar ku dhaca qaniinyada cayayaanka.
Diyaargarowga dhagxaanta waxaa loo isticmaalaa gubashada iyo isdifaaca xoqida, dhaawacyada ulcerative ee mareenka caloosha.
Soo-saaraha warshadaha loo isticmaalo sida biostimulator.
Caleemaha cagaaran waxaa loo isticmaalaa karinta cuntada saladh iyo maraqa. Kaabashka kaabajka ah waa saldhigga kiciyaha noolaha "biodegrad".
Ha isticmaalin casiirka qulqulaya dadka xummadda leh ee ka soo horjeeda xadgudubka qarsoodiga ee enzymes iyo casiirka gastric. Diyaargarowga stonecrop waa ka hortaga burooyinka malignantiga ah.
Ha isticmaalin mukhadaraadka dhirta iyada oo aan la tashan dhakhtarka ka soo qaybgalay.
Waxyaabaha kiimikada ah, kuwa caadiga ah, madoollada dhaadheer iyo kuwa Cafiska waxay kudhow yihiin stonecrop, taas oo ballaarisa saldhig caano ah oo loogu talagalay soosaarka biostimulants.